Guddoomiye Mursal oo la kulmay Guddi ka socda Odayaasha dhaqanka Koofur Galbeed – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Guddoomiye Mursal oo la kulmay Guddi ka socda Odayaasha dhaqanka Koofur Galbeed
Axad, Janaayo, 20, 2019, (HNN) Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Maxamed Mursal oo uu wehliyo Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Lafta Gareen ayaa la kulmay Guddi ka socday Golaha Odayaasha dhaqanka Koofur Galbeed.
Kulankan ayaa looga hadlay howlaha dib u heshiisiinta Koofur Galbeed iyo sidii deegaanada maamulka looga bilaabi lahaa, waxaana Odayaasha dhaqanka ay u gudbiyeen Guddoomiye Mursal tabashooyin ay ka qabaan dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay Baydhabo.
Odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in loo baahan yahay dib u heshiisiin dhab ah oo ka hirgasho deegaanada Koofur Galbeed, isla markaana maamulka cusub ee Koofur Galbeed hormuud u noqdo dib u heshiisiinta.
Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Lafta Gareen ayaa sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay inuu la fariisto cid walba oo tabasho ka qabta maamulkiisa, isla markaana la xalin doono.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Mursal ayaa sheegay in sababta uu u go’aansaday in magaalada Baydhabo uu sii joogo ay tahay in la xoojiyo dib u heshiisiinta iyo midnimada dadka reer Koofur Galbeed.
Doorashadii muranka badan dhalisay iyo xariggii Mukhtaar Roobow oo ka mid ahaa Musharaxiintii u taagneyd xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa sababtay rabshado iyo qalalaaso hareeyay magaalada Baydhabo, iyadoo xabsiga loo taxaabay dad fara badan, waxaana Maamulka cusub ee Koofur Galbeed isku dayayaa inuu xaliyo tabashooyinka iyo xiisadaha ka dhashay xariggii Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur.
Guddoomiye Mursal oo la kulmay Guddi ka socda Odayaasha dhaqanka Koofur Galbeed added by admin on January 20, 2019